KENKAN WƆ Aja Albanian Arabic Arabic (Iraq) Arabic (Jordan) Arabic (Lebanon) Arabic (Syria) Armenian Armenian (West) Aukan Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Cibemba Cinamwanga Croatian Croatian Sign Language Czech Danish Dutch English Estonian Estonian Sign Language Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabuverdianu Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kisi Kongo Korean Krio Latvian Latvian Sign Language Lingala Lithuanian Lithuanian Sign Language Lovari Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mende Mingrelian Mongolian Mongolian Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Ngangela Nigerian Pidgin Niuean Nivaclé Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huaylla Wanca) Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Russian Sango Saramaccan Sarnami Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tetun Dili Thai Thai Sign Language Tiv Tojolabal Tongan Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Voru Waray-Waray Welsh Yoruba
Yehowa Adansefo ahyehyɛde (“nyamesom ahyehyɛde”) a ɛwɔ wiase nyinaa no gye tom sɛ, sɛ yɛkɔ mmara mu a, obiara wɔ hokwan sɛ wɔbɔ ne kokoam nsɛm ho ban. Ahyehyɛde no san gye tom sɛ nkitahodi pa ho hia pa ara. Ɛtɔ da a, ehia sɛ wogye nkurɔfo ho nsɛm bi, na ama wɔatumi adi wɔn a wɔyɛ Yehowa Adansefo bi ahiade ho dwuma. Afei nso, wogye nkurɔfo ho nsɛm a ɛte saa, sɛnea ɛbɛyɛ a wobedi ahyehyɛde no atirimpɔw a ɛne sɛ wɔbɛboa afoforo ma wɔate Bible ase na wɔayɛ afoforo adɔe ho dwuma. Bio nso, wogye tom pa ara sɛ, ehia sɛ wɔbɔ nsɛm yi nyinaa ho ban na wɔhwɛ sɛ ɛrenkodi afoforo nsam. (Mmebusɛm 15:22; 25:9) Nkurɔfo kokoam nsɛm a yɛbɛbɔ ho ban no ho hia yɛn pa ara.​—Mmebusɛm 20:19.
Aman horow bi ahyehyɛ mmara a wɔde bɔ nkurɔfo ho nsɛm ho ban. Tete nyinaa, ahyehyɛde no ne wɔn ɔfese a ɛwɔ aman horow so no anya din pa wɔ sɛnea wɔkora nkurɔfo ho nsɛm yiye no so. Wonyaa saa din pa no koraa ansa na aman horow rehyehyɛ ɛho mmara. Ahyehyɛde yi bɛkɔ so abɔ nkurɔfo ho nsɛm a ɛwɔ wɔn nsam no ho ban. Wɔrensɛe din pa a wɔanya no da.
Nea Yegyina So Bɔ Nkurɔfo Nsɛm Ho Ban. Ahyehyɛde yi gyina nsɛm a edidi so yi so na ɛbɔ nkurɔfo ho nsɛm ho ban:
Yɛrenyɛ nyiyim, na yɛde mmara bɛyɛ adwuma.
Yebegye nkurɔfo ho nsɛm, akora so, na yɛde ayɛ adwuma, de adi ahyehyɛde no atirimpɔw ho dwuma. Ahyehyɛde no atirimpɔw ne sɛ ɛbɛboa afoforo ma wɔate Bible ase yiye na aboa wɔn a wɔakɔ ahokyere mu.
Yɛbɛhwɛ sɛ wo ho nsɛm no nyinaa yɛ nokware na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Sɛ ɛbɛda adi sɛ mfomso bi wɔ wo ho nsɛm a wɔahyehyɛ no mu a, ahyehyɛde no bɛyɛ emu nsakrae ntɛm ara.
Yɛbɛkora wo ho nsɛm no so kosi sɛ atirimpɔw nti a yegyei anaa wode maa yɛn no bɛba awiei.
Yɛbɛyɛ nea yebetumi biara abɔ nsɛm a wode ama yɛn no ho ban.
Yɛde abɛɛfo mfiri ne akwan horow a wɔde kora nkurɔfo ho nsɛm so na ɛbɛbɔ wo nsɛm no ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a ɛrenkodi obi a onni kwan sɛ ne nsa ka nsam. Afei kɔmputa ahorow a yɛde nkurɔfo ho nsɛm gu so no, password da so, na wɔn a wɔwɔ kwan sɛ wɔde di dwuma nko ara na ɛwɔ password no. Yɛpɔn adwuma biara a, yɛto ɔfese ahorow no mu. Ɛhɔ adwumayɛfo no nko ara na ebia wɔbɛma wɔn kwan ama wɔawura mu bere a yɛapɔn no.
Yɛremfa obiara ho nsɛm mmena Yehowa Adansefo ɔfese ahorow biara gye sɛ ehia sɛ yedi ahyehyɛde no atirimpɔw a ɛne sɛ yɛbɛboa afoforo ma wɔate Bible ase yiye anaa yɛpɛ sɛ yɛboa ebinom a wɔn ho akyere wɔn. Yehowa Danseni biara pene saa asɛm yi so, efisɛ ofi ne pɛ mu na asi gyinae sɛ ɔbɛyɛ Yehowa Danseni.
Nkurɔfo ho nsɛm a yegye fi obiara a ɔbɛyɛ ɔdawurubɔfo ne nea yɛde yɛ a wɔaka ho asɛm wɔ Nhyehyɛe a Wɔayɛ Ma Yɛde Ayɛ Yehowa Apɛde nhoma no mu no nso, yegyina nneɛma a yɛaka yi ara so na ɛbɔ ho ban. Wɔde saa nhoma no ma Yehowa Adansefo nyinaa bere a wɔama wɔn kwan sɛ wɔnkɔ asɛnka no. Sɛ wopɛ ho nsɛm pii a, hwɛ Nhyehyɛe a Wɔayɛ Ma Yɛde Ayɛ Yehowa Apɛde no mu.
Obiara wɔ hokwan sɛ wɔbɔ ne ho nsɛm anaa ne kokoam nsɛm ho ban, wɔyɛ mu nsakrae anaa wɔpopa. Yehowa Adansefo gye saa asɛm yi tom na wɔde yɛ adwuma. Enti wogyina akwankyerɛ a ɛwɔ Nhyehyɛe a Wɔayɛ a Wɔde Di Nkurɔfo Ho Nsɛm Ho Dwuma Wɔ Wiase Nyinaa, ɔfã a ɛne Wo Fahodi no so na ɛyɛ saa.
Nhyehyɛe a Yehowa Adansefo De Bɔ Nkurɔfo Ho Nsɛm Ho Ban Wɔ Wiase Nyinaa a yɛaka ho asɛm yi, ɛma yehu sɛnea Yehowa Adansefo di nkurɔfo ho nsɛm ho dwuma wɔ wiase nyinaa.
Share Share Nhyehyɛe a Yehowa Adansefo De Bɔ Nkurɔfo Ho Nsɛm Ho Ban Wɔ Wiase Nyinaa